My Astro View: တားရော့ကို အဆောင်ပြုခြင်း
တားရော့ကတ်တွေကိုဗေဒင်ဟောရာမှာသာမကပါဘူး။ ယတြာချေ၊ အဆောင်ပေးရာမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရကြောင်း ဖတ်မှတ်လေ့လာရပါတယ်။ ဘယ်လို အဆောင်ပြုလဲဆိုတော့ ကတ်ပြားကို ရေမွှေးနဲ့ဆွတ်ပြီး မကြာခဏနမ်းပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ သွားလေရာသယ်ဆောင်သွားရပါမယ်တဲ့။
တားရော့မေဂျာကတ်တွေထဲက နံပါတ် ၈ ခွန်အား Strength ကိုအဆောင်ပြုရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်စီးပွားရေးချွတ်ချော်ညံ့ဖျင်းနေသူတွေ၊ ယိမ်းယိုင်နေသူတွေကတော့ တားရော့နံပါတ် ၂ သီလရှင်ဆရာမကြိး ကတ်ကို ဆောင်ရပါမယ်တဲ့။
ဘောစိ သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့စားပွဲမှာ the Emperor ကတ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ပြုံးမိပါသေးတယ်။ ဧကရာဇ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပုံက ယူထားလို့ သူဟာအတော်ကို လူလေးစားခံရလောက်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိနေပါတယ်။ပညာတွေလဲ
အရမ်းတော်၊ထက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘုရင်ကြီးဆိုတော့ကာ..ငယ်သားတွေရဲ့ အမြင်ကတ်မှုကိုလည်း ခံရပါတယ်။ သူ့ရဲ့သြဇာထက်မြက်မှု၊ ကျော်ဇောမှုတွေနဲ့အတူ လူအတော်များများရဲ့ လန့်ကြောက်မှုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခကတော့ ဗေဒင်ဟောရင် အထောက်အကူပြုအောင်လို့ မှန်အောင်လို့..Page of Cup ကတ်ကို အဆောင်ပြုတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။နောက် ဆရာကြီးကပဲ ငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူတွေအတွက် Five of Wand ကတ်ကို ဆောင်ရမယ်လို့ ညွှန်ပြထားလေရဲ့။
တားရော့ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းဘယ်ကစတယ်ဆိုတာအငြင်းပွားနေကြဆဲဖြစ်ပြီး ဗေဒင်ဟောရုံ၊ ကစားရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ နက်ရှိုင်းတဲ့ လောကီဂန္ဓရီအတတ်တွေကိုပါ ညွှန်ပြထားပါတယ်။
မြင်တတ်တဲ့သူတွေ၊ သိသူတွေ ဖော်စားသွားခဲ့ကြပါပြီ။
ကျနော်လည်း ပြူးပြဲပြီး မြင်ကြည့်နေပါတယ်။
ဘာမှ မမြင်ရသေးခင် Magician ကတ်ပြားလေးကိုတော့ သဘောကျလို့
ဘလော့မှာ ကိုယ်ပိုင် သင်္ကေတလေးလုပ်ထားပါရဲ့။
တားရော့နဲ့ အစ်မ ရှေ့ဖြစ်လေး ဟောပေးပါဦးနော်။ အစ်မ ဆိုက်ဒ်နောက်တစ်ခုကို လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေး
တားရော့အဆောင်လုပ်တော့ ထူးထူးခြားခြားကြုံတာ သတိထားမိတာလေးတွေရှိရင်လဲ ပြောပြဦးနော်
ကိုကို လာသွားတယ် ကွဲ့ :P
Nice your blog. I'm so interest in tarot and all its facilities which we can get. Please upload more than about tarot.bye brother!